Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eMexico » ICaribbean yaseMexico ibhiyozela unyaka omnye wokuvula kwakhona
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuQasha iMoto • Iindaba zeCaribbean • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zokuhamba eMexico • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Ngeendlela ezingama-42 ezisuka eUnited States, ukunxibelelana komoya neYurophu ukusuka eJamani, eFrance, eSpain, eGreat Britain, ePortugal, eRashiya, ePoland, eTurkey, iinqwelomoya ezisuka eLatin America ezinje ngeBelize, iColombia, iBrazil, iCosta Rica, iPanama, iPeru, IRiphabhlikhi yaseDominican neVenezuela, ukongeza kwiinqwelomoya eziya kwizikhululo zeenqwelomoya ezintathu iQuintana Roo, eCancun, eCozumel naseChetumal, iMexico yaseCaribbean namhlanje iyafana namandla kunye nokubuyisa ngempumelelo kwezokhenketho.
Unxibelelwano lomoya, iziseko ezingakumbi zehotele, kunye namashishini avulekileyo ziziphumo zokubuyiselwa ngempumelelo kwezokhenketho.
Icandelo labucala kunye neenzame zikarhulumente zazibalulekile ekuvulekeni kwakhona kweendawo
Iindawo ekuyiwa kuzo zigcina iiProtokholi zoThintelo lwezeMpilo ukuze kubuye ngokukhuselekileyo
Kule veki iCaribbean yaseMexico ibhiyozela unyaka omnye wokuphinda uvule ukhenketho emva kwengxaki yezempilo ebangelwe yintsholongwane ye-SARS-CoV-2 enyanzelise ukuba kuyekwe inxenye enkulu yemisebenzi kwihlabathi liphela, kubandakanya ukhenketho.
NgoJuni 2020, Isikhululo senqwelomoya saseCancun kubhaliswe kuphela imisebenzi engama-32, ekwayi-16 ababefikile: ezili-12 kuzwelonke kunye ne-4 zamazwe ngamazwe (nge-2 kaJuni) Nangona kunjalo, emva konyaka, kukho irekhodi lemisebenzi engama-470, engama-235 afikayo: angama-82 kuzwelonke nakuma-153 amazwe ngamazwe (ngoJuni 5).
Ngokumalunga nokuhlala ehotele, bekukho umyinge we-2.5% kwiRiviera Maya ngoMeyi 2020, kunye ne-5.69% kwiCancun nasePuerto Morelos Hotel Zone kwangelo xesha linye. Ngomhla ka-Meyi ka-2021, i-Riviera Maya yaxela umyinge wama-53.3% wokuhlala ehotele naseCancun, ePuerto Morelos, nase-Isla Mujeres baxela umyinge wama-58%.
Isatifikethi sokuCoca nokuKhuseleka okuCocekileyo kunye noKhuseleko (CPPSIT), esiphuhliswe yiQuintana Roo Tourism Secretariat, sivumele iinkampani zabakhenkethi ukuba zilungelelanise amanyathelo afanelekileyo abandakanya utshintsho kwimikhwa yococeko njengokufaka ijeli yotywala kunye nokusetyenziswa kobuso ebusweni. Ukuhamba kude, ukunciphisa umngcipheko wokudluliselwa kwentsholongwane phakathi kwabantu, ukongeza kuKhanya kweNdawo yokuHanjiswa kweZithuthi kuRhulumente ebeka umthamo ovunyelweyo ngokwenziwa kwesahlulo. Ezi ntshukumo, zithathwe ngurhulumente waseQuintana Roo kwaye zenziwa licandelo labucala kunye nabemi, kunye nokubhengezwa kokhenketho njengeyona nto ibalulekileyo yiRhuluneli uCarlos Joaquín, evunyelwe ukuba iindawo zokufika zeCaribbean zaseMexico ziqale ukwamkela iindwendwe ngoJuni 2020 .
“Sele kudlule unyaka, kwaye kuyonwabisa kakhulu ukubona ukuba iinzame zoosomashishini, abasebenzi kunye norhulumente kubangele ukubuyela kwimeko entle kwezokhenketho eQuintana Roo,” utshilo uDarío Flota Ocampo, umlawuli jikelele yeBhodi yezoKhenketho iQuintana Roo (QRTB).
Ngokwenxalenye yayo, iQRTB iphumeze ubuchule bokukhuthaza ukhenketho ngephulo laseMexico laseCaribbean "Elona Lizwe liBalaseleyo", neliphuhlise amanyathelo athile kumacandelo erenti zeholide, igalufa, impilo kunye neentlanganiso zokhenketho. Ukongeza kwiisemina ezibonakalayo kunye nabameli bokuhamba ukusukela ngoMeyi ukuya kuDisemba 2020 kwaye ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, kunye neentlanganiso nabameli beenqwelomoya, abaqhubi bezokhenketho, ukuthatha inxaxheba kwimiboniso ebonakalayo kunye neenzame ezininzi ezijolise ekukhuthazeni iindawo ekuya kuzo iiCaribbean zaseMexico kwihlabathi liphela.
Ngokwengcaciso evela kwiCandelo loCwangciso lobuChule le-QRTB, kunyaka ukusukela oko kwaqala ukwenziwa kwakhona kokhenketho, ngaphezulu kwe-7 yezigidi zabakhweli batyelele iQuintana Roo kwaye, enkosi kwizicwangciso, amanyathelo kunye namanyathelo awenzileyo ngexesha lokuvuselelwa kwezokhenketho, kunokwenzeka ukuqikelela ukufika kwabanye abakhweli abazizigidi ezi-6 kwiinyanga ezintandathu ezizayo zika-2021.